တစ်ဦးကားသစ်ကိုဝယ်ခြင်းငှါမတတ်နိုင်တဲ့သူကလူအများကြီးရှိပါတယ်, သို့မဟုတ်မိမိတို့၏သားသမီးများ၏တဦးတည်းအဘို့မှာပထမဦးဆုံးကားကိုဝယ်ယူနေကြတယ်. ဘယ်သူကမှတစ်ဦးသံပုရာဝယ်ဖို့လိုလား, မကောင်းတဲ့မတော်တဆမှုဖြစ်တော်မူကြောင်းကိုတစ်ခုသို့မဟုတ်မော်တော်ယာဉ်, လူတိုင်းကောင်းသောအခြေအနေပိုပြီးသို့မဟုတ်ထိုထက်နည်းသော Pre-ပိုင်ဆိုင်သောမော်တော်ယာဉ်ဝယ်ယူလိုလား. သင်တစ်ဦး Pre-ပိုင်ဆိုင်သောကားတစ်စီးကိုဝယ်ယူအ​​ပေါ်စီစဉ်နေတယ်ဆိုရင်သင်တစ်ဦးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဝယ်အောင်ရာကားတစ်စီးပေါ်ဆုံးဖြတ်ခြင်းမပြုမီစဉ်းစားရန်လိုအပ်ပါကြောင်းအရာများစွာကိုရှိပါတယ်. ခင်ဗျားနဲ့မကောင်းတဲ့မော်တော်ယာဉ်ကိုဝယ်ယူရန်အနေဖြင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရန်ပြုနိုင်သည်အရေးအပါဆုံးအရာများ၏တစ်ဦးမော်တော်ယာဉ်သမိုင်းကိုအစီရင်ခံစာဝယ်ယူရန်ဖြစ်ပါသည်, ထို့အပြင်တစ်ဦး vin စစ်ဆေးမှုများအဖြစ်လူသိများ.
တစ်ဦး Pre-ပိုင်ဆိုင်သောကားတစ်စီးကိုဝယ်ယူခြင်းမပြုမီသင်ပထမဦးဆုံးသင်တစ်ဦးသည်ပညာရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်နေပါတယ်ကြောင်းအာမခံချက်ကိုကူညီဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုအတွက်ကားတစ်စီးနှင့် ပတ်သက်. အချို့သောအခြေခံကျဖြစ်ရပ်မှန်ထွက်ရှာသင့်တယ်. ကြောင်းကောင်းတဲ့သန့်ရှင်းတောက်ပကားတစ်စီးသင်တစ်ဦးသံပုရာမှာရှာကြသည်တစ်ခုလောလောလတ်လတ်ရေနွေးငွေ့အင်ဂျင်ကသန့်ရှင်းအခန်းနှင့်အတူရှိ၏? ထိုသို့မကောင်းတဲ့ကားတစ်စီးမတော်တဆမှုခဲ့ပြီ, ဒါမှမဟုတ်ကြောင့်ရေကြီးခဲ့, သို့မဟုတ်ပိုဆိုးသေးပါ, ဒါကြောင့်အခိုးခံရသိရသည်? ကားတစ်စီးသမိုင်းကိုအစီရင်ခံစာ purchasing နှင့်တစ်ဦး vin running အားဖြင့်သင်တို့ကိုအလွယ်တကူဤမေးခွန်းများကိုအချို့ကိုနှင့်တစ်ဖွဲ့လုံးတွေအများကြီးပိုပြီးဖြေဆိုနိုင်စစျဆေး.
ကျွမ်းကျင်သူတစ်ဦးကတစ်ဦးကိုအသုံးပြုလောတကားကိုဝယ်ယူတဲ့အခါသင်ဝယ်မစဉ်းစားကြသည်ကိုကားပေါ်တွင်မော်တော်ယာဉ်သမိုင်းကိုအစီရင်ခံစာရှိခြင်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်ထူးချွန်ရွေ့လျားတဦးဖြစ်တယ်ဆိုတာသင်ပြောပြလိမ့်မယ်. သင်သည်ထိုအထူးသဖြင့်ကားတစ်စီးသို့မဟုတ်ထရပ်ကားရဲ့တသက်တာအတွက်မှတဆင့်ရှိခဲ့ကြပေမည်အရာကိုသိဘယ်တော့မှ. အလွန်ကြီးစွာသောအတွင်းပိုင်းနှင့်အပြင်ပိုင်းအသေးစိတ်သန့်ရှင်းရေးနှင့်တစ်ဦးကောင်းတဲ့အားဖြင့်ပုန်းကွယ်နေနိုင်ပါသည်မည်မျှအမှုအရာမှာသငျသညျတအံ့တသြမည်ဖြစ်ကြောင်း, တောက်ပသော, ဆေးသုတ်၏လတ်ဆတ်သောအင်္ကျီကို.
မော်တော်ယာဉ်သမိုင်းကိုအစီရင်ခံစာများနှင့် vin စစ်ဆေးမှုများအားလုံးနီးပါးကိုအသုံးပြုကားများနှင့်ကုန်တင်ကားများ၏တွင် track record စစျဆေးဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ကြောင်း. ဒီအစီရင်ခံယာဉ်များကို serial number အပေါ်အခြေခံပြီးကားသမိုင်း၏စံချိန်တင်နှင့်အတူဝယ်လက်များကို (အထိမျးအမှတျ), သူတို့က vin သဖြင့်ကားကိုသမိုင်းကစစ်ဆေး. တစ်ဦး vin number ကိုစစ်ဆေးမှုများကနေအမှုအရာကိုပြသပါလိမ့်မယ် DMV နှင့်အာမခံမှတ်တမ်းများ, ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင် odometer လိမ်လည်မှုနဲ့တူ, မော်တော်ယာဉ်များအတွက်ပြန်ပြောပြသည်နှင့်လည်းသံပုရာဥပဒေကဝယ်ကျောက်ကုန်း, နှင့်လည်းပိုပြီးအရေးကြီးတာကသူတို့အသေးအဖွဲသို့မဟုတ်ကအဓိကတိုက်မှုပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုပြပါလိမ့်မယ်. တခါတရံမှာသတင်းအချက်အလက်များကိုလည်းမော်တော်ယာဉ်တစ်စင်းကိုကားတစ်စီးခဲ့တစ်ခုသို့မဟုတ်ကားတစ်စီးငှားရမ်းသင်္ဘောကနေဝယ်ယူခဲ့ဖြစ်စေမအဖြစ်ရရှိနိုင်ဖန်ဆင်းထားသည်.
ကားတစ်စီးသမိုင်းကိုစစျဆေးနှင့်တစ်ဦး vin အရေအတွက်ကိုရှာဖွေရေးလုပ်ဖို့အွန်လိုင်းအများအပြား websites များကိုရှိပါတယ်. မော်တော်ယာဉ်သမိုင်းကိုအစီရင်ခံစာများနှင့် vin စစ်ဆေးမှုများကားများနှင့်ကုန်တင်ကားများနှင့် SUV ကားရဲ့ထံမှဆိုင်ကယ်မှအရာအားလုံးကိုရရှိနိုင်တယ်, ATV ရဲ့ (လူအပေါင်းတို့သည်မြေမျက်နှာသွင်ပြင်ယာဉ်များ) နှင့် Recreational ယာဉ်များ (RV ရဲ့).
မည်မျှရှိသည်ဤအစီရင်ခံစာများကုန်ကျ vendor မှရောင်းချသူထံမှကွဲပြားခြားနားသည်နှင့်ပတ်ပတ်လည်များသောအားဖြင့်ဖြစ်ပါသည် $20 ရန် $40 ဒေါ်လာငွေ. အခမဲ့ advertise သောသူတို့သညျအများအားဖြင့်ကိုယ့်စကားဝှက်ကိုရှင်းလင်းဖေါ်ပြများမှာ, သောငါတို့သည်အကြာတွင်မှရလိမ့်မယ်. တစ်ဦးမော်တော်ယာဉ်ဝယ်ယူသူများသမိုင်းကိုအစီရင်ခံစာသင်ယ်ယူဖို့အကြောင်းရှိပါတယ်ယာဉ်နှင့် ပတ်သက်. စိတ်၏အချို့သောမိဿဟာယရှိခြင်းများအတွက်ပေးဆောင်ဖို့ငယ်လေးတစ်စျေးနှုန်းဖြစ်ပါသည်. ဒါကြောင့်အလားအလာကောင်းလမ်းကိုနှိမ့်ချစက်မှုပြုပြင်ရေးအတွက်ကားတစ်စီးနှင့်အတူပြဿနာများ၌သင်တို့ကိုဒေါ်လာထောင်ပေါင်းများစွာကိုကယ်တင်နိုင်ပါကပေးဆောင်ဖို့လည်းပိုက်ဆံအနည်းငယ်ပမာဏဖြစ်ပါတယ်. တစ်စုံတစ်ဦးကသူတို့ကားကိုအတူပြဿနာများနှင့် ပတ်သက်. သင်ပြောပြမည်မဟုတ်ကားတစ်စီးရောင်းချနေသည့်အခါအကြိမ်ပေါင်းများစွာ. ဒါတောင်မှစမ်းသပ်မှုတစ်ခုကားမောင်းတကယ်ကောင်းစွာကျော်ရှာဖွေနေပြီးနောက်, သင်ကားတစ်စီးနှင့်အတူမှားယွင်းနေကြောင်းအရာအားလုံးကိုပေါ်တက်ခူးမပြုစေခြင်းငှါ. သင်သည်သင်၏စက်ပြင်ဆရာမှကားတစ်စီးယူသောအခါ၌ပင်, သူတို့ရှိသမျှသည်ယခုပြီးတော့အမှုအရာကိုလက်လွတ်စေခြင်းငှါ,.
တစ်ဦးမော်တော်ယာဉ်သမိုင်းကိုအစီရင်ခံစာရှိခြင်းနှင့်တစ်ဦး vin စစ်ဆေးမှုများလုပ်နေတာဒါကြောင့်အလွန်အရေးပါသည်အဘယ်ကြောင့်ဤမျှယခုသင်တို့ကိုတွေ့မြင်နိုင်ပါ. သင်ဝယ်ယူအ​​ကြောင်းစဉ်းစားနေသောမော်တော်ယာဉ်နှင့် ပတ်သက်. တစ်ဦးထက်ပိုအသိဆုံးဖြတ်ချက်ချရန်ခွင့်ပြုလိမ့်မည်ဟု. ကိစ္စအများစုအတွက်သူတို့ပတ်ပတ်လည်ကုန်ကျ $20 ရန် $40 နှင့်ကြောင်းမ brainer စေသည်. ဒါဟာသင်သောသင်တို့၌အစဉ်မပြတ်ပြုပြင်ဆိုင်တစ်ဆိုင်တွင်ထိုင်နေတဲ့မော်တော်ယာဉ်ကိုရှောင်ကြဉ်ကူညီပေးပါမည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့အတွက်ငွေအနည်းငယ်နှင့်သင်ပိုက်ဆံတစ်တစ်တန်ကုန်ကျတက်အဆုံးသတ်.
အကောင်းဆုံးစျေးပေါတဲ့ကားသမိုင်းကအစီရင်ခံစာများနှင့်စျေးပေါ vin Check ပြန်လည်ဆန်းစစ်ချက်များ